PCBA + ပလပ်စတစ်သေတ္တာ - Shenzhen Fumax Technology Co. , Ltd.
ကျနော်တို့ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်အသင်းတော်များပါစေ။ PCBA ကိုပလတ်စတစ်ပတ်များဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။
PCB တပ်ဆင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်အတွင်းရှိပလပ်စတစ်မှို / ထိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊
ပလတ်စတစ်မှို / ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတရှိခြင်းသည် Fumax ကိုအခြားသန့်ရှင်းသော PCB ပရိဘောဂစက်ရုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သုံးစွဲသူများသည် Fumax မှကုန်ချောပစ္စည်းများအတွက်အလှည့်ကျသောသော့ချက်ကျသောဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ Fumax နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်စတင်ခြင်းမှသည်အပြီးသတ်ကုန်ပစ္စည်းအထိပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သောပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများမှာ ABS, PC, PC / ABS, PP, Nylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE, etc ။
ပလပ်စတစ်၊ ဝါယာကြိုးများ၊ ဆက်သွယ်မှုများ၊ ပရိုဂရမ်းမင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အထုပ်စသည်တို့ပါ ၀ င်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအားရောင်းချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်ခြင်း / စစ်ဆေးခြင်းခြေလှမ်း
စွမ်းဆောင်ရည် PLC စမ်းသပ်မှု
Labels များ print ထုတ်သည်
Smart Master G3 အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
AOI အလိုအလျောက် Optical စစ်ဆေးရေး
မှန် CT လက်ရှိထရန်စဖော်မာ
DVT ဒီဇိုင်း Validation ကိုစမ်းသပ်
ENIG Electroless နီကယ်နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ
ESD ElectroStatic ဆေးရုံ
IPC ဆက်သွယ်ရေးအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအသင်း, ပုံနှိပ်တိုက်နယ်များအတွက်ယခင် Institute က
အယ်လ်အီးဒီ အလင်း Electroluminescent Diode
PLC PowerLine ဆက်သွယ်ရေး
SOC Chip On System
ဝမ် Wide Area ကွန်ယက်
→ RDOC-XXX-NN အဖြစ်စာရင်းပြုစုထားသောစာရွက်စာတမ်းများ
“ XXXX” ရှိနိုင်သည့်နေရာများမှာ - SUC, QAL, PCB, ELE, MEC သို့မဟုတ် TST“ NN” သည်စာရွက်စာတမ်းနံပါတ်ဖြစ်သည်။
XXXX ရှိသည့်နေရာ - SUC, QAL, PCB, ELE, MEC သို့မဟုတ် TST
ဘယ်မှာ "NNNN" လိုအပ်ချက်များ၏နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်
→ MLSH-MG3-NN အဖြစ်စာရင်းခွဲများ
ဘယ်မှာ "NN" သည်ခွဲစည်းဝေးပွဲ၏အရေအတွက်သည်
1.3 စာရွက်စာတမ်း versioning စီမံခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့ခွဲများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများသည် FCM-0001-VVV တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသူတို့၏မူကွဲများရှိသည်
Firmwares သည်၎င်းတို့၏ဗားရှင်းများအားမှတ်တမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည် - FCL-0001-VVV
“ VVV” သည်စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြစ်သည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းသည် Smart Master G3 ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။
နောင်တွင်“ ထုတ်ကုန်” အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော Smart Master G3 သည်အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအနေဖြင့်ဒြပ်စင်ပေါင်းများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသော်လည်းအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်စနစ်တွင်တည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Mylight Systems (MLS) သည်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်လုပ်သူ ၀ န်ဆောင်မှု (EMS) ကိုရှာဖွေသည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းသည်ကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး အား Mylight Systems အားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပေးခွင့်ပြုရမည်။
- ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များပေးပါ။
EMS ကန်ထရိုက်တာသည်ဤစာရွက်စာတမ်း၏လိုအပ်ချက်များ၏ ၁၀၀% ကိုအဖြေပေးရမည်။
MLS သဘောတူညီချက်မပါပဲလိုအပ်ချက်များကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
အချို့သောလိုအပ်ချက်များ (“ EMS ဒီဇိုင်းတောင်းဆိုခြင်း” ဟုအမှတ်အသားပြုခြင်း) သည်ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူအားအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးမှုများကဲ့သို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အားအဖြေပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ EMS ၏ကန်ထရိုက်တာများအတွက်အဖြေများတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအားအကြံပြုရန်အတွက်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖွင့်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် MLS ကအဖြေကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
MLS သည်ရွေးချယ်ထားသော EMS ကန်ထရိုက်တာနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိရမည်၊ သို့သော် EMS ကန်ထရိုက်တာသည် MLS ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အခြားကန်ထရိုက်တာများကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
RDOC-SUC-1 ။ PLD-0013-CT စုံစမ်းစစ်ဆေး 100A
RDOC-SUC-2 ။ MLSH-MG3-25-MG3 ထုပ်ပိုးသည့်လက်
RDOC-SUC-3 ။ NTI-0001 -installation MG3 သတိပေးချက်
RDOC-SUC-4 ။ MG3 ၏ AR9331 ဘုတ်၏ GEF-0003-Gerber ဖိုင်ကို
ရွေးချယ်ထားသောကန်ထရိုက်သည်တစ်လလျှင် ၁၀K ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။
ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးဖော်ပြချက်ဖော်ပြချက် MLS မှပေးရမည်။
တင်ပို့မည့်ထုပ်ပိုးမှုတွင် (ပုံ ၂ ကိုကြည့်ပါ)
- ထုတ်ကုန် MG3
- စံပုံးတစ်ခု (ဥပမာ - ၁၆၃x ၁၃၅x ၁၀၅ စင်တီမီတာ)
- Mylight လိုဂိုနှင့်မတူကွဲပြားသောအချက်အလက်များပါဝင်သောချစ်စရာကောင်းသည့်အပြင်ဘက်လက် (မျက်နှာ4မျက်နှာ) RDOC-SUC-2 ကိုကြည့်ပါ။
-3မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး။ RDOC-SUC-1 ကိုကြည့်ပါ
- Ethernet cable ၁ ခု - ပြားချပ်ချပ်ကြိုး၊ ၃ မီတာ၊ ROHS၊ ၃၀၀V အထီးကျန်မှု၊ Cat 5E or 6၊ CE၊ အနည်းဆုံး ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
- ၁ နည်းပညာလက်ကမ်းစာစောင် RDOC-SUC-3
- မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များပါသောပြင်ပတံဆိပ် ၁ ခု (စာသားနှင့်ဘားကုဒ်) - ကိုးကားစရာ၊ နံပါတ်၊ PLC MAC လိပ်စာ
- ဖြစ်နိုင်လျှင်ပလပ်စတစ်အိတ်မှကာကွယ်မှု (ဆွေးနွေးရန်)
ထုပ်ပိုး၏ပုံ 2. ဥပမာ
အဆိုပါကန်ထရိုက်ကန်ထရိုက်ပိုကြီးတဲ့ packages များအတွင်း၌ပေးပို့ခြင်းယူနစ် packages များမည်သို့ပေးရမည်။
အထုပ်အထုပ် ၂ ၏အများဆုံးအရေအတွက်သည်သေတ္တာတစ်လုံးထဲတွင် ၂၅ ဖြစ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီ၏သတ်မှတ်ချက်အချက်အလက် (QR ကုဒ်ပါသော) ကိုကြီးမားသောအထုပ်တစ်ခုစီတွင်ပြင်ပတံဆိပ်ဖြင့်မြင်ရမည်။
REQ-SUC-0030: PCB ထောက်ပံ့ရေး
အဆိုပါကန်ထရိုက်ကန်ထရိုက် PCB ထောက်ပံ့သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ရမည်။
REQ-SUC-0060: Passive အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်ခြင်း
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည် RDOC-ELEC-3 ရှိ“ ယေဘူယျ” ဟုသတ်မှတ်ထားသော passive အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက်ရည်ညွှန်းချက်များကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ passive အစိတ်အပိုင်းများသည်ဖော်ပြချက်ကော်လံ RDOC-ELEC-3 နှင့်ကိုက်ညီရမည်။
ရွေးချယ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို MLS မှအတည်ပြုရမည်။
ထုတ်ကုန်၏ရည်ရွယ်ချက် EXW ကုန်ကျစရိတ်ကိုသီးသန့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင်ပေးရပြီးနှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
- တစ်ခုချင်းစီကိုအီလက်ထရောနစ်ပရိသ၏ BOM, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ
- စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်: ခုံတန်းရှည်၊ ကိရိယာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ အကြိုစီးရီးများ…
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖိုင်ကိုအပြီးသတ်စီးရီးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ MLS မှအပြည့်အဝပြီးစီးရမည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖိုင်အတွင်းရှိမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆို MLS မှတင်ပြရမည်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီထုတ်ကုန် ၂၀၀ ၏ကြိုတင်စီးရီးအရည်အချင်းကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
ဤရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည့်ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပြissuesနာများကို MLS သို့သတင်းပို့ရမည်။
ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအပြီးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ (သို့) ဒီဇိုင်းသက်တမ်းစစ်ဆေးမှု (DVT) ကိုအနည်းဆုံးဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
- လျင်မြန်သောအပူချိန်သံသရာ -20 ° C / + 60 ° C
- PLC စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများ
- Drop စမ်းသပ်မှု
- အေး / ပူစတင်
- စိတ်ကြိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် impedance ကိုစစ်ဆေးခြင်း
အသေးစိတ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကန်ထရိုက်တာများမှပေးမည်ဖြစ်ပြီး MLS မှလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
မအောင်မြင်သောစစ်ဆေးမှုအားလုံးကို MLS သို့တင်ပြရမည်။
- Hardware ဗားရှင်းဖိုင်
- Firmware ဗားရှင်းဖိုင်
- စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဖိုင် (MAC address နှင့်နံပါတ်စဉ်များပါ ရှိ၍)
ဤအချက်အလက်တစ်ခုခုကိုလွဲချော်လျှင်သို့မဟုတ်မရှင်းလင်းပါက EMS သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုမစတင်ရပါ။
- ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ ၁၀% အောက်
- အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည် MSL ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို MLS သို့ပေးရမည်။
PCB နှင့် BOM တွင်ဖော်ပြထားသောအစိတ်အပိုင်းများစွာသည် MSL လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာသည်။
ထုတ်ကုန်သည် RoHS လိုက်နာမှုရှိရမည်။
ကန်ထရိုက်တာခွဲသည်ကန်ထရိုက်တာမှထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို MLS သို့အကြောင်းကြားရမည်။
အဆိုပါကန်ထရိုက်စာချုပ် ISO9001 အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ကန်ထရိုက်တာသည်၎င်း၏ ISO9001 လက်မှတ်ကိုပေးရပါမည်။
REQ-QUAL-0051: ကန်ထရိုက်တာအရည်အသွေး 2
ကန်ထရိုက်တာသည်အခြားကန်ထရိုက်တာများနှင့်လက်တွဲပါက၎င်းတို့ကို ISO9001 အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမည်။
အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပြားများအားလုံးကို ESD ကာကွယ်မှုဖြင့်ကိုင်တွယ်ရမည်။
သန့်ရှင်းရေးသည်အထိခိုက်မခံသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောထရန်စဖော်မာများ၊ ဆက်သွယ်မှုများ၊ အမှတ်အသားများ၊ ခလုတ်များ၊
ကန်ထရိုက်တာသည် MLS ကို၎င်း၏သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပေးရမည်။
အားလုံးသောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် PCB အသုတ်များသည် AQL ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ၀ င်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများသည်၎င်းတို့ကိုပြင်ပ၌ထားရှိပါက AQL ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ဝင်လာသည့်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုရှိရမည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည် MLS အား AQL ကန့်သတ်ချက်များအပါအ ၀ င်၎င်း၏အဝင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပေးရမည်။
REQ-QUAL-0090: Output ထိန်းချုပ်မှု
ထုတ်ကုန်သည်အနည်းဆုံးနမူနာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် AQL ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် output output ကိုထိန်းချုပ်ရမည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည် MLS အား AQL ကန့်သတ်ချက်များအပါအ ၀ င်၎င်း၏ input control လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပေးရမည်။
မည်သည့်စမ်းသပ်မှုပင်ဖြစ်ပါစေစစ်ဆေးမှုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုမအောင်မြင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကိုအရည်အသွေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် MLS ကန်ထရိုက်တာမှသိမ်းဆည်းရမည်။
ငြင်းပယ်သောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးနိုင်သည့်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆို MLS သို့အကြောင်းကြားရမည်။
EMS ကန်ထရိုက်တာသည်စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုမှထုတ်ပစ်လိုက်သောထုတ်ကုန်အရေအတွက်တိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်လိုက်တိုင်းအတွက် MLS သို့အစီရင်ခံရမည်။
ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုကိုးကား (အတိအကျကိုကိုးကားနှင့်အသုတ်) ကိုခြေရာခံဖြစ်ရမည်။
ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မီ MLS သို့အကြောင်းကြားရမည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူထံမှငြင်းပယ်မှုသည် (၂) နှစ်အောက်တွင် ၃% အထက်ဖြစ်ပါက MLS သည်အပြည့်အဝအသုတ်ပြန်သွားနိုင်သည်။
REQ-QUAL-0140: စာရင်းစစ် / ပြင်ပစစ်ဆေးခြင်း
MLS သည်အရည်အသွေးရှိသောအစီရင်ခံစာများကိုမေးမြန်းရန်နှင့်စစ်ဆေးမှုများကိုတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မဆိုကန်ထရိုက်တာ (ကိုယ်ပိုင်ကန်ထရိုက်တာများအပါအဝင်) သို့လည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်။ MLS ကိုတတိယပါတီကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
REQ-QUAL-0150: Visual စစ်ဆေးခြင်း
- တံဆိပ်များ / စတစ်ကာများစစ်ဆေးခြင်း
- Soldering အားဖြည့်
ကန်ထရိုက်ငှားရမ်းသူသည် MLS အား၎င်း၏ Visual inspections များအား AQL ကန့်သတ်ချက်များအပါအ ၀ င်ပေးရမည်။
အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သောအဆင့်တစ်ခုကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်လျှင်၊ Hipot စစ်ဆေးခြင်းနှင့် FAL စစ်ဆေးမှုတို့အပြီးတွင်အဆင့်များအားလုံးထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမည်။
7 PCBs လိုအပ်ချက်များကို
အဆိုပါထုတ်ကုန်သုံးကွဲပြားခြားနားသော PCB ၏ရေးစပ်သည်
RDOC-PCB-1 ။ ပုံနှိပ်ဘုတ်များ IPC-A-600 လက်ခံနိုင်ဖွယ်
RDOC-PCB-2 ။ MG3 ၏အဓိကဘုတ်အဖွဲ့၏ GEF-0001-Gerber ဖိုင်
RDOC-PCB-3 ။ MG3 ၏ AR7420 ဘုတ်၏ GEF-0002-Gerber ဖိုင်ကို
RDOC-PCB-4 ။ MG3 ၏ AR9331 ဘုတ်၏ GEF-0003-Gerber ဖိုင်ကို
RDOC-PCB-5 ။ IEC 60695-11-10: 2013: မီးအန္တရာယ်စမ်းသပ်ခြင်း - အပိုင်း ၁၁-၁၀ ။ စမ်းသပ်မီးတောက်များ - ၅၀ W အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်မီးလျှံစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
REQ-PCB-0010: PCB ဝိသေသလက္ခဏာများ
ပြင်ပကြေးနီအထူ 35μm / 1oz မိနစ်
PCB အရွယ်အစား 840x840x1.6mm (အဓိကဘုတ်အဖွဲ့), 348x326x1.2mm (AR7420 ဘုတ်အဖွဲ့),
780x536x1mm (AR9331 ဘုတ်)
အတွင်းပိုင်းကြေးနီအထူ 17μm / 0.5oz မိနစ်
အနည်းဆုံးအထီးကျန် / လမ်းကြောင်းအကျယ် 100μm
အနိမ့်အမြင့်ကနေတဆင့် 250 μm (စက်မှု)
PCB ပစ္စည်း FR4
Silkscreen ဟုတ်တယ်အပေါ်၊ အောက်၊ အဖြူရောင်၊
Soldermask ဟုတ်ပါတယ်၊ အပေါ်နှင့်အောက်၊ အစိမ်းအားလုံးအပေါ်အစိမ်း
Panel ကိုအပေါ် PCB ဟုတ်ပါတယ်, ဝယ်လိုအားအပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်
ကနေတဆင့်အပေါ် Solder ကိုမျက်နှာဖုံး ဟုတ်တယ်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ROHS / လက်လှမ်းမီ /
REQ-PCB-0020: PCB စမ်းသပ်ခြင်း
ပိုက်ကွန်ကိုသီးခြားထားခြင်းနှင့်စီးဆင်းခြင်းကို ၁၀၀% စမ်းသပ်ရမည်။
PCB များကို marking လုပ်ထားသောနေရာတွင်သာခွင့်ပြုသည်။
PCB များကို PCB ၏ရည်ညွှန်းချက်၊ ဗားရှင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲတို့ဖြင့်မှတ်သားထားရမည်။
REQ-PCB-0040: PCB ထုတ်လုပ်သောဖိုင်များ
RDOC-PCB-2၊ RDOC-PCB-3၊ RDOC-PCB-4 တို့ကိုကြည့်ပါ။
သတိထားပါ၊ REQ-PCB-0010 ၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အဓိကသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပြီးလေးစားရမည်။
REQ-PCB-0050: PCB အရည်အသွေး
IPC-A-600 လူတန်းစား 1. ကြည့်ရှုအောက်ပါ RDOC-PCB-1 ။
PCB တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည် CEI 60695-11-10 de V-1 နှင့်ကိုက်ညီရမည်။ RDOC-PCB-5 ကိုကြည့်ပါ။
အီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ် ၃ ခုတပ်ဆင်ရမည်။
RDOC-ELEC-1 ။ အီလက်ထရောနစ်စည်းဝေးပွဲများ၏ IPC-A-610 လက်ခံနိုင်မှု
RDOC-ELEC-2 ။ MG3 RDOC ၏အဓိကဘုတ်အဖွဲ့၏ GEF-0001-Gerber ဖိုင်
ELEC-3 ။ MG3 RDOC ၏ AR7420 ဘုတ်၏ GEF-0002-Gerber ဖိုင်ကို
ELEC-4 ။ MG3 RDOC ၏ AR9331 ဘုတ်၏ GEF-0003-Gerber ဖိုင်ကို
ELEC-5 ။ MG3 RDOC-ELEC-6 ၏အဓိကဘုတ်အဖွဲ့၏ BOM-0001-BOM ။
BOM-0002 MG3 RDOC-ELEC-7 ၏ AR7420 ဘုတ်အဖွဲ့၏ BOM ဖိုင်။
BOM-0003 MG3 ၏ AR9331 ဘုတ်အဖွဲ့၏ BOM ဖိုင်
ပုံ3အီလက်ထရောနစ်စုဝေးအီလက်ထရောနစ်ပျဉ်ပြား၏ဥပမာ
BOM RDOC-ELEC-5၊ RDOC-ELEC-6 နှင့် RDOC-ELEC-7 တို့ကိုလေးစားရမည်။
REQ-ELEC-0020: SMD အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း -
RDOC-ELEC-2၊ RDOC-ELEC-3၊ RDOC-ELEC-4 တို့ကိုကြည့်ပါ။
REQ-ELEC-0030: အပေါက်ပေါက်များမှတဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း -
အကြွင်းအကျန်တံများကိုအမြင့် ၃mm အောက်တွင်ဖြတ်ရမည်။
Soldering အားဖြည့် relay ကိုအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
ပုံ ၄။ အဓိကဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်အားဖြည့်အားဖြည့်ခြင်း
အလွန်ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်များရှိပါကအခန်းတွင်းရှိအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုမထိုးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်အဓိကဘုတ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော F2, F5, F6 တို့တွင်အပူကျုံ့ထားရပါမည်။
ပုံ5ဖျူးပတ်ပတ်လည်အပူကျုံ့
REQ-ELEC-0070: မှန် CT ဆက်သွယ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံတွင်ပြထားသည့်အမျိုးသမီးမှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အပေါက်များကိုအဓိကဘုတ်သို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းချရမည်။
ရည်ညွှန်း MLSH-MG3-21 connector ကိုသုံးပါ။
ပုံ6မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး connectors
REQ-ELEC-0071: မှန် CT ကွန်ပြူတာများသည်ကော်ကော်ကော်ကော်
၎င်းတို့ကိုတုန်ခါမှု / ထုတ်လုပ်မှုအလွဲသုံးစားမှုများမှကာကွယ်ရန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်နက်ရှင်တွင်ကော်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
ကော်ရည်သည် RDOC-ELEC-5 အတွင်းတွင်ရှိသည်။
မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး connectors အပေါ်ပုံ 7. ကော်
REQ-ELEC-0090: ညီလာခံ AOI စစ်ဆေးခြင်း -
ဘုတ်အဖွဲ့၏ ၁၀၀% သည် AOI စစ်ဆေးခြင်း (ဂဟေဆက်ခြင်း၊ orientation နှင့် marking) ရှိရမည်။
အသေးစိတ် AOI အစီအစဉ်ကို MLS သို့ပေးရပါမည်။
REQ-ELEC-0100: Passive အစိတ်အပိုင်းများထိန်းချုပ်ခြင်း -
အနည်းဆုံးလူ၏အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် PCB ကိုအစီရင်ခံခြင်းမပြုမီ passive အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရမည်။
အသေးစိတ် passive အစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းချုပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို MLS သို့ပေးရမည်။
REQ-ELEC-0110: ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းစစ်ဆေးမှု -
မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်မဆို X ray စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်သော်လည်းအပူချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ရမည်။
REQ-ELEC-0120 - ပြင်ဆင်ခြင်း -
U21 / U22 (AR7420 board), U3 / U1 / U11 (AR9331 board) မှလွဲ၍ လုံး ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင် မှလွဲ၍ ကျန်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်ပျဉ်ပြားများကိုလက်ဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် disassembly လုပ်လျှင်၎င်းသည်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုခုံတွင်ပျက်ကွက်သောကြောင့်၎င်းသည် Hipot စမ်းသပ်မှုနှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုထပ်လုပ်ရမည်။
REQ-ELEC-0130: AR9331 ဘုတ်နှင့် AR7420 ဘုတ်အကြား 8pins connector ကို
J10 connectors များသည်ဘုတ်အဖွဲ့ AR9331 နှင့် AR7420 ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီစည်းဝေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။
အသုံးပြုမည့် connector ၏ရည်ညွှန်းချက်သည် MLSH-MG3-23 ဖြစ်သည်။
connector သည် 2mm pitch ရှိပြီးအမြင့်သည် 11mm ဖြစ်သည်။
ပုံ ၈။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ်များအကြားကြိုးနှင့်ဆက်သွယ်မှု
REQ-ELEC-0140: Main board နှင့် AR9331 board ကြားရှိ 8pins connector ကို
J12 connectors များသည် main board နှင့် AR9331 boards ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီစည်းဝေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။
2 connector များနှင့်အတူ cable ကို၏ရည်ညွှန်းသည်
အသုံးပြုသော connectors များသည် 2mm pitch ရှိသည်။ cable ရဲ့အရှည်က 50mm ဖြစ်သည်။
REQ-ELEC-0150: Main board နှင့် AR7420 ဘုတ်တို့အကြား 2pins connector ကို
JP1 connector ကို AR7420 board နှင့် main board ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီစည်းဝေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။
cable ရဲ့အရှည်က 50mm ဖြစ်တယ်။ ဝါယာကြိုးများကိုလိမ်ပြီးအကာအကွယ်ပေးရမည်။
RDOC-MEC-1 ။ MG3 ၏ Enclosure Top ၏ PLD-0001-PLD
RDOC-MEC-2 ။ MG3 ၏ပူးတွဲအောက်ခြေ၏ PLD-0002-PLD
RDOC-MEC-3 ။ MG3 အလင်းထိပ်၏ PLD-0003-PLD
RDOC-MEC-4 ။ MG3 ၏ခလုတ် 1 ၏ PLD-0004-PLD
RDOC-MEC-5 ။ MG3 ၏ Button2၏ PLD-0005-PLD
RDOC-MEC-6 ။ MG3 ၏ Slider ၏ PLD-0006-PLD
RDOC-MEC-7 ။ IEC 60695-11-10: 2013: မီးအန္တရာယ်စမ်းသပ်ခြင်း - အပိုင်း ၁၁-၁၀ ။ စမ်းသပ်မီးတောက်များ - ၅၀ W အလျားလိုက်၊
RDOC-MEC-8 ။ တိုင်းတာခြင်းအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်များ IEC61010-2011
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုမှု - အပိုင်း ၁ - အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ
RDOC-MEC-9 ။ IEC61010-1 2010: တိုင်းတာခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအတွက်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များ၊
နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုခြင်း - အပိုင်း ၁ - အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ
RDOC-MEC-10 ။ MG3-V3 ၏ BOM-0016-BOM ဖိုင်
RDOC-MEC-11 ။ PLA-0004 - ညီလာခံပုံ MG3-V3
MGE ၏ပုံ9ပေါက်ကွဲခဲ့အမြင်။ RDOC-MEC-11 နှင့် RDOC-MEC-10 တို့ကိုကြည့်ပါ
စက်မှုထုပ်ကိုပလတ်စတစ်အိတ် ၆ လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် RDOC-MEC-8 နှင့်ကိုက်ညီရမည်။
REQ-MEC-0020: ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်မီးလျှံကိုထိန်းထားရမည် (EMS ဒီဇိုင်းကိုမေးသည်)
RDOC-MEC-7 အရပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည် V-2 နှင့်အထက်အဆင့်ရှိရမည်။
REQ- MEC-0030: ချိတ်ဆက်မှုပစ္စည်းများသည်မီးလျှံရှိရမည် (EMS ဒီဇိုင်းကိုမေးသည်)
RDOC-MEC-7 အရ connectors အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများမှာ V-2 or grade ရှိရမယ်။
၎င်း မှလွဲ၍ အပေါက်များမရှိရပါ။
- Connectors (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှု 0.5mm ထက်နည်းရမည်)
- စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်မှုအတွက်အပေါက် (၁.၅mm)
- Ethernet ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပူချိန် (၁.၅ မီလီမီတာအနိမ့်အမြင့် ၄ မီလီမီတာအကြား) ရှိနိုင်သည့်အပေါက်များ (အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုကြည့်ပါ) ။
ပုံ ၁၀။ အပူလွန်ကဲမှုအတွက်အပြင်ဘက်ဝင်းအတွင်းရှိအပေါက်များနမူနာ
အဆိုပါအိမ်ရာ RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6 အစီအစဉ်များကိုလေးစားရပါမည်
REQ-MEC-0080: ဆေးထိုးမှိုနှင့် tools များ
EMS သည်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အ ၀ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးသွင်းမှု / ထွက်ကုန်အမှတ်အသားများကိုကုန်ပစ္စည်း၏ပြင်ပမှမမြင်နိုင်ရပါ။
ပုံ ၁၁။ မီးပိုက်နှင့်ခလုတ်များကိုတပ်ဆင်ထားသောအပူအရင်းအမြစ်
အရည်ပျော်မှတ်တွင်ပူသောအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြု၍ ခလုတ်များကိုတပ်ဆင်ရမည်။
REQ-MEC-0110: ထိပ်ပိုင်းဝင်းတွင် ၀ င်ပါ
AR9331 ဘုတ်ကိုထိပ်ဝင်းတွင်တပ်ရန် screw နှစ်ခု ၄ ခုရှိသည်။ RDOC-MEC-11 ကိုကြည့်ပါ။
တင်းကျပ်သော torque သည် ၃.၀ မှ ၃.၈ kgf.cm. အကြားရှိရမည်။
အဓိကဘုတ်ကိုအောက်ခြေဝင်းသို့တပ်ဆင်ရန် screw နှစ်ခု ၄ ခုရှိသည်။ RDOC-MEC-11 ကိုကြည့်ပါ။
သူတို့အကြားပူးတွဲ fix ဖို့တူညီတဲ့ screw နှစ်ခုအသုံးပြုကြသည်။
တင်းကျပ်နေသော torque သည် ၅.၀ နှင့် ၆ ကီလိုဂရမ်ကြားရှိရမည်။
REQ-MEC-0130: CT စုံစမ်းစစ်ဆေး connector ကိုလမ်းပိတ်ထားသောနေရာမှဖြတ်သွားသည်
CT စုံစမ်းစစ်ဆေး connector ၏အနိမ့်နံရံအစိတ်အပိုင်းကိုကောင်းမွန်သော hermeticity နှင့်မလိုချင်သောဝါယာကြိုးဆွဲဆန့်ကျင်ကောင်းမွန်သောကြံ့ခိုင်ခွင့်ပြုပါရန် pinch မပါဘဲစုဝေးပြုပြင်ရပါမည်။
ပုံ 12 မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ Trough မြို့ရိုးကိုအစိတ်အပိုင်းများ
9.3 ပြင်ပ silkscreen
REQ-MEC-0140: ပြင်ပ silkscreen
ပုံ 13 လေးစားခံရဖို့ပြင်ပ silkscreen ပုံဆွဲ
REQ-MEC-0141: silkscreen အရောင်
silkscreen ၏အရောင်သည်အပြာရောင် (ခလုတ်များနှင့်တူညီသည်) ရှိရမည်ဖြစ်သော MLS လိုဂို မှလွဲ၍ အနက်ရောင်ရှိရမည်။
- တံဆိပ်၏အရွယ်အစား: 50mm * 10mm
- စာသားအရွယ်အစား - ၂ မီလီမီတာအမြင့်
- ဘားကုဒ်အတိုင်းအတာ: 40mm * 5mm
အမှတ်စဉ်နံပါတ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်၏ပုံ 14 ဥပမာ
REQ-MEC-0151: Serial နံပါတ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်အနေအထား
ပြင်ပ silkscreen လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
REQ-MEC-0152: Serial နံပါတ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်အရောင်
RDOC-MEC-9 အရ serial နံပါတ်တံဆိပ်ကပ်ထားကာသတင်းအချက်အလက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
Serial နံပါတ်တန်ဖိုးကို MLS မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့် (ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်) နှင့်သို့မဟုတ်အထူးအပ်နှံထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်ပေးရမည်။
သခင် 2019 = 19 တစ်နှစ်တာ လ = 12 ဒီဇင်ဘာ batcheach လတစ်လအတွက်နမူနာ ManufacturerReference
REQ-MEC-0160: Activation ကုဒ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်အရွယ်အစား
ပုံ 15 activation ကုဒ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်၏ဥပမာ
REQ-MEC-0161: Activation ကုဒ်ဘားကုဒ်တံဆိပ်ကပ်အနေအထား
REQ-MEC-0162: Activation ကုဒ်ဘားကုတ်တံဆိပ်အရောင်
Activation Code Bar ဘားကုဒ်အရောင်ဟာအနက်ရောင်ဖြစ်ရမယ်။
REQ-MEC-0163: Activation ကုဒ်ဘားကုတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများ
RDOC-MEC-9 အရ activation ကုဒ်အမှတ်အသားကိုကော်ထားရပါမယ်။
activation ကုဒ်တန်ဖိုးကို MLS မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့် (personalization file) နှင့်သို့မဟုတ်အထူး software တစ်ခုမှပေးရမည်။
- အရွယ်အစား 48mm * 34mm
- သင်္ကေတများကိုတရားဝင်ပုံစံဖြင့်အစားထိုးရမည်။ Minimun အရွယ်အစား: 3mm ။ RDOC-MEC-9 ကိုကြည့်ပါ။
- စာသားအရွယ်အစား - အနည်းဆုံး ၁.၅
ပုံ 16 အဓိကတံဆိပ်၏ဥပမာ
အဓိကတံဆိပ်ကို MG3 ၏ဘေးဘက်တွင်သီးသန့်အခန်းတွင်ထားရမည်။
RDOC-MEC-9၊ အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးတံဆိပ်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ Mylight-Systems အမည်နှင့်ထုတ်ကုန်ရည်ညွှန်းချက်များအရအဓိကတံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိစေရ။
အဓိကတံဆိပ်တန်ဖိုးများကို MLS မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့် (ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်) နှင့်သို့မဟုတ်အပ်နှံထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်ပေးရမည်။
REQ-MEC-0170 ရှိတန်ဖိုးများ၊ စာသား၊ လိုဂို / ကမ္ပည်းစာများသည်ဒီပုံကိုလေးစားရမည်။
9.5 မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး
REQ-MEC-0190: မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးဒီဇိုင်း
EMS သည် CT probes cable များကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် extension ကို cable ကိုရန်။
ပုံဆွဲအားလုံးကို MLS သို့ပေးရမည်
REQ-MEC-0191: မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစိတ်အပိုင်းများသည်မီးလျှံနှံ့နေရမည် (EMS ဒီဇိုင်းကိုမေးသည်)
CEI 60695-11-10 အရပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်တန်း V-2 သို့မဟုတ်ပိုကောင်းရမည်။
REQ-MEC-0192: မှန် CT မှန်ဘီလူးအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများတွင်ကေဘယ်လ်သီးခြားထားရှိရမည် မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ပစ္စည်းများတွင်နှစ်ဆ 300V သီးခြားစီရှိရမည်။
REQ-MEC-0193: မှန် CT စစ်ဆေးခြင်းအမျိုးသမီးကေဘယ်လ်
အနိမ့်အမြင့် ၁.၅ မီလီမီတာ (အပေါက်အကျယ် ၂ မီလီမီတာ) နှင့်အတူအမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်များကိုလက်လှမ်းမီမျက်နှာပြင်မှခွဲထုတ်ရမည်။
ကေဘယ်လ်အားတစ်ဖက်မှ MG3 သို့ဂဟေဆက်ပြီးအခြားတစ်ဘက်တွင်သော့ခတ်နိုင်။ ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အမျိူးမျိူးသောအပေါက်တစ်ခုရှိရမည်။
MG3 ၏ပလတ်စတစ်အိတ်ကို ဖြတ်၍ သွားရန်အသုံးပြုထားသော cable တွင် crimped pass-through အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိရမည်။
Pass-through အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပြီးတွင် cable သည်အရှည် ၇၀ မီလီမီတာခန့်ရှိရမည်။
ဤအပိုင်း၏ MLS ရည်ညွှန်းမှုသည် MLSH-MG3-22 ဖြစ်သည်
သင်္ဘောသဖန်း 18. မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးအမျိုးသမီး cable ကိုဥပမာ
REQ-MEC-0194: မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးအထီး cable ကို
ကေဘယ်ကြိုးသည်တစ်ဖက်မှ CT စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဂဟေဆော်ပြီးတစ်ဖက်တွင်သော့ခတ်နိုင်ပြီးအထီးအပေါက်ပါရှိရမည်။
Cable အရှည်သည် connector မပါရှိဘဲ ၆၀၀mm ရှိရမည်။
ဤအပိုင်း၏ MLS ရည်ညွှန်းမှုသည် MLSH-MG3-24 ဖြစ်သည်
REQ-MEC-0195: မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတိုးချဲ့ cable ကို
ကြိုးအရှည်အရှည် ၃၀၀၀ မီလီမီတာရှိရမည်။
ဤအပိုင်း၏ MLS ရည်ညွှန်းမှုသည် MLSH-MG3-19 ဖြစ်သည်
REQ-MEC-0196: မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေးရည်ညွှန်း
CT စုံစမ်းစစ်ဆေးထုတ်လုပ်သူနှင့် CT စုံစမ်းမှုနှင့်ကေဘယ်ကြိုးတို့ကိုတပ်ဆင်ရန် EMS ကိုခွင့်ပြုထားသည်။
ကိုးကားစရာ 1 မှာ MLSH-MG3-15 ဖြစ်သည်။
- YHDC ထုတ်လုပ်သူမှ 100A / 50mA မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး SCT-13
- MLSH-MG3-24 ကေဘယ်လ်
ပုံ 20 မှန် CT စုံစမ်းစစ်ဆေး 100A / 50mA MLSH-MG3-15 ဥပမာ
RDOC-TST-1 ။ PRD-0001-MG3 စမ်းသပ်ခုံတန်းလျားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
RDOC-TST-2 ။ MG3 စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား၏ BOM-0004-BOM ဖိုင်
RDOC-TST-3 ။ MG3 စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား၏ PLD-0008-PLD
RDOC-TST-4 ။ MG3 စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား၏ SCH-0004-SCH ဖိုင်ကို
10.1 PCBA စမ်းသပ်ခြင်း
REQ-TST-0010: PCBA စမ်းသပ်ခြင်း
အီလက်ထရွန်နစ်ပျဉ်ပြားများ၏ ၁၀၀% ကိုစက်မှုမတပ်မီစစ်ဆေးသင့်သည်
- N / L1 / L2 / L3, main board အကြားရှိအဓိကဘုတ်တွင် power supply သီးခြားထားရှိသည်
- 5V, XVA (10.8V to 11.6V), 3.3V (3.25V to 3.35V) နှင့် 3.3VISO DC voltage တိကျမှု၊ main board
- Power မရှိလျှင် main board သည် relay ကိုကောင်းစွာဖွင့်နိုင်သည်
- RS485 ကို GND နှင့် A / B၊ AR9331 ဘုတ်များအကြားသီးခြားထားခြင်း
- RS485 connector, AR9331 board ပေါ်တွင် A / B အကြား 120 ohm ခုခံမှု
- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V နှင့် 5V_RS485 DC voltage တိကျမှု၊ AR9331 ဘုတ်
- VDD နှင့် VDD2P0 DC ဗို့အားတိကျမှု၊ AR7420 ဘုတ်
အသေးစိတ် PCBA စစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို MLS သို့ပေးရပါမည်။
REQ-TST-0011: PCBA စမ်းသပ်ခြင်း
ထုတ်လုပ်သူသည်ဤစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့ tool တစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကိရိယာ၏အဓိပ္ပါယ်ကို MLS သို့ပေးရပါမည်။
PCBA စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာပုံ ၂၁။ ပုံ
10.2 Hipot စမ်းသပ်ခြင်း
REQ-TST-0020: Hipot စမ်းသပ်ခြင်း
ကိရိယာများ၏ 100% ကိုသာနောက်ဆုံးစက်မှုစည်းဝေးပွဲကိုအပြီးစမ်းသပ်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန် disassembly (အကယ်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း / ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်) ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်စက်မှုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံစစ်ဆေးရမည်။ Ethernet port နှင့် RS485 (ပထမအခြမ်း) နှစ်ခုလုံး၏ High Voltage isolations များသည် conductor များအားလုံးတွင် power supply (ဒုတိယဘက်) ဖြင့်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ဒါကြောင့် cable တစ်ခုသည် Ethernet ports နှင့် RS485 wires ၁၉ ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်
အခြားကေဘယ်ကြိုးသည်4ဝါယာကြိုးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် - ကြားနေနှင့်အဆင့်သုံးဆင့်
EMS သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းပြုလုပ်ရန် cable များအားတစ်ခုချင်းစီတွင် conductor များအားလုံးရှိစေရန်ကိရိယာတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။
DC ကို 3100V ဗို့အားလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ 5s အမြင့်ဆုံးကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
လွယ်ကူသော Hipot စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ပုံ ၂၂
10.3 စွမ်းဆောင်ရည် PLC စမ်းသပ်မှု
REQ-TST-0030: စွမ်းဆောင်ရည် PLC စမ်းသပ်မှု
(EMS ဒီဇိုင်းသည် MLS ဖြင့်မေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံစံပြုခြင်း)
ထုတ်ကုန်များ၏ 100% စမ်းသပ်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်
ထုတ်ကုန်သည် PL 7667 ETH plug အနေဖြင့်အခြား CPL ထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့် 300m cable ကို ဖြတ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
script“ plcrate.bat” ဖြင့်တိုင်းတာသောဒေတာနှုန်းသည် 12mps၊ TX နှင့် RX အထက်ဖြစ်ရမည်။
လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်“ set_eth.bat” script ကိုသုံးပြီး MAC ကို“ 0013C1000000” နှင့် NMK ကို“ MyLight NMK” သို့ပြောင်းပါ။
စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည် power cable assemble အပါအ ၀ င် ၁၅/၃၀ ထက်ပိုသောကြာမြင့်ရမည်။
Burn-In ကိုအီလက်ထရောနစ်ဘုတ်ပြား ၁၀၀% တွင်အောက်ပါအခြေအနေများနှင့်ပြုလုပ်ရမည် -
- ၄ နာရီ
- 230V ဓာတ်အားလိုင်းပါ
- ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
- Ethernet ဆိပ်ကမ်းများပိတ်ထား
- PLC NMK နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်ကုန်အမြောက်အများ (အနည်းဆုံး ၁၀)၊ powerline အတူတူဖြစ်သည်
REQ-TST-0041: Burn-In စစ်ဆေးခြင်း
- နာရီတိုင်း check led ညှိသည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့် relay ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်
(အနည်းဆုံးစမ်းသပ်ခုံတစ်ခုကို MLS မှထောက်ပံ့သည်)
ထုတ်ကုန်များ၏ 100% ကို Final စည်းဝေးပွဲကိုစမ်းသပ်ခုံတန်းလျားအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှုအချိန်သည် ၂.၃၀ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ကြားတွင်ဖြစ်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အော်ပရေတာ၏အတွေ့အကြုံ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကွဲပြားသောပြ(နာများ (firmware update၊ တူရိယာနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြorနာသို့မဟုတ် power supply ၏တည်ငြိမ်မှု) တို့ဖြစ်သည်။
- Firmware ၏ version ကိုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါက update လုပ်ပါ
- PLC ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ထုတ်။ စစ်ဆေးပါ
- Check ခလုတ်များ: Relays, PLC, Factory reset
- Leds ကိုစစ်ဆေးပါ
- RS485 ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ
- Ethernet ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ
- ကိရိယာအတွင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံနံပါတ်များရေးပါ (MAC address, Serial number)
စမ်းသပ်ခုံ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို RDOC-TST-1 နှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်။
ပုံ 23 နောက်ဆုံးစည်းဝေးပွဲကိုစမ်းသပ်တံဆိပ်ဥပမာ
ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိသိမ်းဆည်းထားသောမှတ်တမ်းအားလုံးကို Mylight Systems သို့ပုံမှန် (တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်) ပုံမှန်ပို့ရမည်။
REQ-TST-0055: နောက်ဆုံးစည်းဝေးပွဲကိုစမ်းသပ် Remote ဒေတာအခြေစိုက်စခန်း
မှတ်တမ်းများကိုအဝေးမှဒေတာဘေ့စ်သို့အချိန်နှင့်အမျှပေးပို့နိုင်ရန်အတွက်စမ်းသပ်မှုခုံသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်။ ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်အတွင်း၌ EMS ကိုအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဤဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိုသည်။
လိုအပ်ပါက MLS သည်စမ်းသပ်ခုံတန်းရှည်များစွာကို MES သို့ပို့နိုင်သည်
RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 နှင့် RDOC-TST-4 အရ EMS သည်စမ်းသပ်ခုံတန်းကိုသူ့ဟာသူပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်လည်းရှိသည်။
အကယ်၍ EMS သည်မည်သည့် optimization ကိုမဆိုလုပ်လိုလျှင် MLS ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းရမည်။
ပြန်လည်ထုတ်ဝေသောစမ်းသပ်ခုံတန်းလျားများကို MLS မှအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
10.6 SOC AR9331 ပရိုဂရမ်းမင်း
REQ-TST-0060: SOC AR9331 ပရိုဂရမ်းမင်း
MLS မှမပံ့ပိုးပေးသော universal programmer တစ်ခုနှင့်အတူတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ device ၏ memory ကိုရှင်းထုတ်ရမည်။
Flashed ခံရသည့် Firmware များသည်အမြဲတမ်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး MLS မှတစ်ခုချင်းစီတွင်အတည်ပြုရမည်။
ဤနေရာတွင်မည်သူမည်ဝါကိုမျှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ဤကိရိယာအားလုံးတွင်တူညီသော Firmware ရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခုံတန်းလျားတွင်နောက်ကျလိမ့်မည်။
10.7 PLC chipset ကို AR7420 ပရိုဂရမ်းမင်း
REQ-TST-0070: PLC AR7420 ပရိုဂရမ်းမင်း
စမ်းသပ်ကာလအတွင်း PLC chipset ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စစ်ဆေးမှုမလုပ်မီစက်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုဖျတ်ပစ်ရမည်။
PLC chipset ကို MLS မှပေးသောဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတစ်ဆင့်စီစဉ်သည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်စစ်ဆင်ရေးန်းကျင် 10s ယူပါ။ ထို့ကြောင့် EMS သည်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက်အများဆုံး ၃၀ (Cable power + Ethernet cable + Flash + Remove cable) ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်မည်သူမည်ဝါကိုမျှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ဤကိရိယာအားလုံးတွင်တူညီသော Firmware ရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း (MAC address နှင့် DAK) ကိုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုခုံအတွင်း၌ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
PLC chipset မှတ်ဉာဏ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ flashed နိုင်သည် (ကြိုးစားရန်) ။